आकाश र पूजाको सम्बन्धमा खाडल, पूजा भन्छिन्- मेरो मित्रता एकोहोरो रहेछ – Sandesh Press
July 17, 2021 481
यो घटनापछि के आकाश र पूजाबीच व्यक्तिगत सम्बन्धमा पूर्णविराम लागेको हो ? यसबारे अहिल्यै भन्नु हतारो हुनेछ किनभने यसअघि पटक-पटक झगडा भएपनि उनीहरु पुनः मिलेका छन् ।
Prevनेपाली बालिका सियोनालाई दिइयो १ घण्टामै २५ करोडको औषधि
Nextआज बिवाह हुँदै थियो तर राति नै सदाको लागि अस्ताइन् पुनम !
यी हुन् निर्मला ‘हत्या आरोप’मा पक्राउ परेका भारतीय नागरिक, भर डीएनएकै !
श्रीमान राज कुन्द्रा जेलमा भएको बेला शिल्पा शेट्टी घरमा भित्र्याईन नयाँ सदस्य, सामाजिक संजालमा आयो गालीको वर्षा